सिटिजन्स बैंकको बाह्रौ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न « Sansar News
२ माघ २०७५, बुधबार ११:३३
२ माघ काठमाडौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको बाह्रौ वार्षिक साधारण सभा संचालक समितिका डा.शंकर प्रसाद शर्मा अध्यक्षतामा काठमाडौँकोे लैनचौर बैँक्वेटमा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले आ.व.२०७४-७५ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गरि पारित गरीएको छ ।
बैंक र सहायक कम्पनी सिविआईएल क्यापिटल लिमिटेड समेतको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०७५ आषाढ मसान्तको वासलात, आ.व. २०७४-०७५ को नाफा नोक्सानीको हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका एकीकृत वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी स्वीकृत भएको छ ।
यस बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को मुनाफाबाट आफ्ना शेयर धनीहरुलाई रु २९,१४,४५,७७३ (करीव ३.६ प्रतिशत) बोनस शेयर तथा रु १३,१३,५५६,१४३ (करीव १.६ प्रतिशत) नगदलाभांशदिने भएको छ । सभाका अध्यक्षले शेयरधनीहरुबाट प्राप्त सुझाव अनुसार बैंकको काम कारवाही संचालन गर्नेमा विश्वास दिलाउदैँ भविष्यमा बैंकले अझ बढी प्रगतिहासिल गर्न सक्ने विश्वास सभालाई गराएको छ ।
साथै शेयरधनी तथा बैंकसँग सम्बन्धित अन्य महानुभावहरुले पुर्याएको सहयोगको लागि धन्यवाद प्रकट गर्दै भविष्यमा समेत सहयोग प्राप्त हुनेमा आशा प्रकट गरेका छन् । नेपाली जनताको घरदैलोमा बैंकिंग सेवा पुर्याउदैै आएको यस बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना ८१ वटा शाखा, ७५ वटा ए.टि.एम. र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिव चार लाख ग्राहक वर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
यसका साथसाथै शाखाहरु सँगको समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवम गुनासो सुनुवाई जस्ता कार्यहरू प्रादेशिक कार्यालयले छिटो, छरितो, चुस्त र दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्ने उद्देश्यले बैंकले सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयहरुको स्थापना गरिसकेको छ ।